Nihombo haingana ny index ny vidin'ny sakafo FAO tamin'ny volana aogositra - Potatoes News
The Fanondroana vidin'ny sakafo FAO (FFPI) mitentina 127.4 isa tamin'ny volana aogositra 2021, niakatra 3.9 isa (3.1 isan-jato) tamin'ny volana jolay ary 31.5 isa (32.9 isan-jato) tamin'io vanim-potoana io tamin'ny taon-dasa.
Ny fihemoran'ny FFPI tamin'ny volana aogositra taorian'ny fihenan'ny volana roa nisesy dia notarihin'ny fahazoana mahery tamin'ny siramamy, menaka legioma ary zana-indary serealy.
The Fanondroana ny vidin'ny serealy FAO nanisa isa 129.8 tamin'ny volana aogositra, isa 4.3 (3.4 isan-jato) tamin'ny volana jolay ary isa 30.8 (31.1 isan-jato) ambonin'ny haavon'ny aogositra 2020.
Ny fihenan'ny fanantenana amin'ny fijinjana any amin'ny firenena manondrana sasany dia nanosika ny vidin'ny varimbazaha eran-tany tamin'ny isa 11.1 (8.8 isan-jato) isam-bolana, ka hatramin'ny 41.5 (43.5 isan-jato) no nihoatra ny haavo herintaona lasa izay.
Anisan'ny voamadinika hafa, ny fironana amin'ny vidiny dia nifangaro tamin'ny volana aogositra. Ny fomba fijerin'ny famokarana orza ambany, indrindra ny Kanada sy Etazonia, ary ny fisondrotan'ny vidin'ny varimbazaha dia nanosika ny sara iraisam-pirenena ho 10.9 (9.0 isan-jato) nanomboka tamin'ny volana jolay, ka hatramin'ny 34.7 (35.6 isan-jato) ambonin'ny haavony herintaona lasa izay. Mifanohitra amin'izany kosa, ny vidin'ny katsaka dia nampidina fihenan'ny isa 1.3 (0.9 isan-jato).
Ny tombam-bidin'ny famokarana any Arzantina, EU, ary Okraina dia nanatsara ny voka-dratsin'ny vinavinan'ny famokarana any Brezila sy Etazonia. Ny fitanisana sorghum iraisam-pirenena dia nilatsaka ihany koa tamin'ny volana aogositra, tamin'ny teboka 3.9 (2.5 isan-jato), na dia mbola nitombo 45.5 isa (43.3 isan-jato) aza tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Mandritra izany fotoana izany, ny vidim-bary iraisampirenena dia nijanona teo amin'ny làlana ambany hatrany tamin'ny volana aogositra, notarihin'ny ezaka hampiroboroboana ny varotra vahiny ary koa ny fivezivezena vola.
The Fanondroana vidin'ny menaka legioma FAO nilanja isa 165.7 tamin'ny volana aogositra, nihena 10.3 isa (na 6.7 ​​isan-jato) hatramin'ny ambany volana dimy tamin'ny volana jolay. Ny fanarenana dia hita taratra indrindra amin'ny vidin'ny solika masomboly, voadio, ary ny tanamasoandro ambonimbony kokoa.
Tamin'ny volana aogositra, ny teny nalaina momba ny menaka palmie iraisampirenena dia niverina ho any amin'ny haavo manan-tantara farany teo, izay notohanan'ny ahiahy lava noho ny famokarana ambany tety sy ny famoahana ny lisitra tany Malaysia.
Mandritra izany fotoana izany, ny vidin'ny solika voaolana dia nahazo tohana tamin'ny fangatahana mafy tao amin'ny Vondrona eropeana, tao anatin'ireo fahatsinjovana ny fanamafisana ny famatsiana eran-tany.
Mikasika ny solika tanamasoandro, nidina mafy ny teny nidina ny vidin'ny vokatra iraisam-pirenena taorian'ny nianjerany roa volana nisesy, noho ny fitrandrahana voafetra voafetra ao amin'ny faritry ny Ranomasina Mainty alohan'ny hahatongavan'ireo fijinjana 2021/22 teny an-tsena.
The Fanondroana ny vidin'ny ronono FAO mitentina 116.0 teboka tamin'ny volana aogositra, nihena kely hatramin'ny volana jolay nefa mbola 13.9 isa (13.6 isan-jato) no mihoatra ny sandan'ny volana nifanitsy tamin'ny taon-dasa.
Tamin'ny volana Aogositra dia nilatsaka ny teny iraisam-pirenena momba ny vovo-dronono, izay taratry ny fahalemen'ny fitakiana fanafarana maneran-tany ho an'ny famatsiana toerana miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny fanondranana any Oceania mandritra ny vanim-potoana famokarana vaovao.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny fiakarana vidin'ny fromazy dia nisondrotra, notohanan'ny fiakaran'ny fangatahana anatiny sy ny fanamafisana ny famatsiana tany Eropa, nanoloana ny fihenan'ny vidin'ny Oceania tamin'ny fiakaran'ny vokatra.
Niakatra kely ihany koa ny vidin'ny dibera, noteren'ny fangatahana hafarana avy any Azia Atsinanana ho an'ny fandefasana fotoana fohy.
The Fanondroana vidin'ny hena FAO * mitentina 112.5 isa tamin'ny volana aogositra, somary nitombo ny volana jolay, nametraka ny isa 20.3 (22.0 isan-jato) mihoatra ny sandany tamin'ny volana nifanitsy tamin'ny taon-dasa.
Tamin'ny volana Aogositra, nitombo ny teny nalaina avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny henan'omby sy omby, notohanan'ny fividianana be indrindra, indrindra an'i Chine, ary famatsiana biby tsy maintsy novonoina tany Oseania.
Niakatra ihany koa ny vidin'ny hena akoho amam-borona, hita taratra amin'ny fangatahana fanafarana henjana avy any Azia Atsinanana sy Moyen Orient ary famerana ny famokarana any amin'ny firenena manondrana sasany manerantany noho ny vidim-pidirana avo lenta sy ny tsy fahampian'ny mpiasa.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny vidin'ny henan-kisoa dia nidina noho ny fihenan'ny fividianana an'i Shina sy ny filana anatiny malemy any Eropa ao anatin'ny fiakarana kely amin'ny famatsiana kisoa vonona hamono.
The Fanondroana vidin'ny siramamy FAO nanisa isa 120.1 tamin'ny volana aogositra, niakatra 10.5 isa (9.6 isan-jato) hatramin'ny volana jolay, nanamarika ny fiakarana fahadimy nifanesy isam-bolana sy ny haavony avo indrindra hatramin'ny febroary 2017.
Ny fiakarana farany amin'ny fihenan'ny vidin'ny siramamy iraisampirenena dia nateraky ny ahiahy amin'ny fanimbana ny fanala amin'ny vokatra any Brezila - mpanondrana siramamy lehibe indrindra manerantany, nanampy ny fiatraikany ratsy amin'ny toetr'andro maina.
Ny fiakaran'ny vidim-piainana lehibe kokoa isam-bolana anefa dia nosakanan'ny fihenan'ny vidin'ny solika sy ny fihenan'ny Real Breziliana tamin'ny dolara amerikana.
Ny fanantenana tsara amin'ny famokarana any India sy ny Vondrona eropeana dia nanampy tamin'ny famerana ny tsindry ambony amin'ny vidin'ny siramamy iraisam-pirenena.
* Tsy toy ny vondrona entam-barotra hafa, ny ankamaroan'ny vidiny ampiasaina amin'ny fikajiana ny Index FAO Meat Index dia tsy misy raha ovaina sy navoaka ny Index ny vidin'ny sakafo FAO; noho izany, ny sandan'ny Index ny vidin'ny hena tato anatin'ny volana faramparany dia nalaina avy amin'ny fifangaroan'ny vidiny novinavinaina sy voamarina. Indraindray io dia mety mitaky fanitsiana lehibe amin'ny sanda farany amin'ny FAO Meat Index Index izay mety hisy fiantraikany amin'ny sandan'ny FAO Index ny vidin'ny sakafo.
Tags: AogositraVidin'ny sakafohaingana
Miverina miasa indray ny rindranasa finday
Fianarana: Ny fihenan'ny sakafo amin'ny ovy dia mety hanapaka ny famoahana vokatra 25% ao Shina.
MAZAVA MAORA HO AN'NY INTERPOM 2021!
Vahaolana 11000 taona amin'ny olana maoderina: ny ovy taloha dia mety hiroborobo amin'ny fiovan'ny toetr'andro
REMA dia namolavola mpantsaka mpantsaka / mpanapaka ny oalatra mitondra herinaratra 48 Volt